Any Obama ao Japana, Ankalazaina Amin’ny Rano sy Afo ny Fiandohan’ny Lohataona · Global Voices teny Malagasy
Any Obama ao Japana, Ankalazaina Amin'ny Rano sy Afo ny Fiandohan'ny Lohataona
Voadika ny 16 Marsa 2017 5:10 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, عربي, Español, Svenska, Ελληνικά, Français, русский, English
Afondasy tamin'ny fetibe fankalazana ny Omizu Okuri tao Obama, prefektioran'i Fukui. Sary avy amin'i Nevin Thompson
Ho amin'ny alina iray isan-taona farafahakeliny nandritra ireo taona 1.250, mifamory ao aminà tempoly tokana iray any amin'ireo havoana mitatao amin'i Obama, tanàna kelin'ny mpanjono sy mpamboly eo amin'ny Ranomasina Japoney, mba hanomanana ny fahatongavan'ny lohataona miaraka amin'ny afo sy rano. Jinguji, tempoly iray ao Obama, no trano ho an'ny Omizu Okuri (“ny fandefasana ny rano”), rehefa nalefa avy ao Obama ho any Nara, renivohitry ny fanjakàn'ny amperora fahiny ny rano voahasina, 90 kilaometatra any atsimo.
Ny 2 Martsa ny fetibe fankalazana ao Obama amin'ity taona ity, ary heverina fa tokony ho eo amin'ny folo andro eo no hahitan'ilay rano ny làlany ho any Nara. Mampifangaro ny fombam-pivavahana fanaon'ny Bodista sy Shinto ilay fetibe, ary koa ny an'i Shugendo, fomba fanompoam-pivavahana an-tendrombohitra fahiny fanao hatramin'ny ela any amin'ireo havoana manodidina an'i Obama. Manasongadina afo be dia be, ary mahatonga ireo sary manaitra ilay fetibe:
Niorina tao Nara nandritra ny ankamaroan'ny taonjato fahavalo ny renivohitra imperialin'i Japana. Foiben'ny fanjakana sy fivavahana Japoney ilay renivohitra, ary tempoly zanabolana maro no naorina tany amin'ireo faritany ao Japana. Manamarika ny iray amin'ireny tempoly ireny ny Jinguji ao Obama, ary efa ”nandefa” rano ho an'ny Tempoly Goavan'i Todaiji ao Nara isaky ny volana Martsa nandritra ny arivo taona mihoatra. Araka ny Wikipedia:
Sintonina hankao amina siny roa raha ny tena marina ny rano [ao Jinguji, any Obama], ny siny iray mitondra ny rano tamin'ny taona teo aloha, ary ilay iray hafa mitondra ny rano avy tamin'ireo fetibe rehetra teo aloha. Avy tamin'ilay siny izay mitondra ny rano amin'izao fotoana izao, fatrany kely amin'izany rano izany no aidina amin'ilay siny izay mitondra ny rano tamin'ireo fetibe teo aloha. Tehirizina isan-taona ny vokatr'ilay fifangaroan-drano azo, ary natao nandritra ny 1.200 taona mahery io dingana io.
Amin'ny maha ampahany amin'ilay lanonana azy, arehitra eo amin'ny tanin'i Jinguji ao Obama ny afondasy iray, mialoha ny fiakaran'ny filaharana itondràna fanilo sy ilay rano izy tenany ihany hankany an-tendrombohitra ary hankany amin'ny fiavian'ny Renirano Onyu, izay hamitana tanteraka ny fetibe Omizu Okuri amin'ny fandrarahana ny rano ho ao amin'ilay sakelidrano.
Fetibe Omizu Okuri ao Abama, Prefektiora Fukui. Sary avy amin'i Nevin Thompson
Amin'ny ankapobeny, atao mba hanadio ny rano sy ireo mpandray anjara amin'ny fetibe ilay afo, mba hanampy amin'ny fanaovana fiatombohana madio eo am-piandohan'ny lohataona.
Fetibe Omizu Okuri ao Obama, Prefektiora Fukui. Sary avy amin'i Nevin Thompson
Vokany, manintona olona an-jatony isan-taona ny fetibe any amin'ireo havoana mitatao eo ambonin'i Obama.
Maro amin'ireo mpandray anjara amin'ny fetibe no mponina ao an-toerana avy amin'ny manodidina an'i Obama, ary manao fitafiana fotsy nentim-paharazana iombonan'ireo mpampihatra ny Shugendo.
Tsy maintsy manao saron-tava sy aro-rivotra ireo mpandray anjara amin'ny fitanjozorana mankany amin'ny fiavian'ny Renirano Onyu mba hiarovana ny tenany amin'ny tifitra pitik'afo avy amin'ireo fanilo lehibe.
Mbola azo iadiana hevitra raha tena hamakivaky tokoa an'i Obama hatrany Nara ilay rano. Misy tandavan-tendrombohitra maro eny amin'ny lalàny, hatramin'ny farihy Japoney lehibe indrindra, Farihy Biwa. Natao mba ho fankalazàna manamarika kokoa ny fiandohan'ny lohataona ny fetibe Omizu Okuri.